Global Voices teny Malagasy » Iran : Nogadraina Ilay Mpitoraka Bilaogy Mpomba an’i Ahmadinejad · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Aogositra 2012 7:59 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika miora
Nizara  ho mpomba an'i Ahmadineja na mpomba an'i Khamenei ireo mpitoraka bilaogy islamista herintaona lasa izay. Ankehitriny kosa, nisedra ny zavatra nahazo ireo mpitoraka bilaogy taloha tamin'ny herintaona lasa ireo mpitoraka bilaogy maro mpomba an'i Ahmadinejad: fanagadrana, fanivanana na fiakarana fitsarana.
Raha ny voalazan'ireo Mpanao gazety Tsy voafetran-tsisintany (Reporters Without Borders) , efa maro ny mpitoraka bilaogy mpomba ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad lasibatry ny biraon'ny mpampanoa lalàna ao Tehran noho ny fitsikerana ny mpiray ombon’antoka amin’i Ayatollah Ali Khamenei hatramin’ny nanombohan’ny taom-baovao Iraniana (ny 21 martsa).
Mpitoraka bilaogy iray tahaka izany i Ahmad Shariat, mpandrindra ny bilaogy atao hoe : Nedai az Daron  (Làlana Anatiny). Nogadraina izy ny 22 Jolay rehefa namaly ny taratasy fiantsoana hanao tatitra tany amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ao Tehran. Notanana am-ponja izy rehefa tsy nahaloa ny onitra mitentina 100 tapitrisa tomans (75.000 euros)
Maro ireo mpitoraka bilaogy islamista no namoaka lahatsoratra hanohanana azy. Tanatin'ny ankamaroan'izy ireo, dia nahitàna ny sarin’I Ahmad Shariat manao T-shirt misy ny sarin’I Imad Mughniyeh . Tamin'ny ankapobeny dia nanakiana ny fitsarana Iraniana ireo mpitoraka bilaogy ireo, ary nanoratra mikasika ny tetika hamerina ny fiaraha-monina Iraniana ho tahaka ny tany alohan’ny fandresen’i Ahamdinejad tamin’ny 2005.
Nanohana an'i Ahmadinejad i Ahmad Shariat tao anatin'ireo lahatsorany ary namely ireo nihizingizina ho mpomba ny fitondrana teo aloha (Oosoolgaras). Nanoratra  izy tao anatin’ilay lahatsoratra fa nanandrana handrava an'i Ahmadinejad ny Oosoolgaras ary hamerina ny fiainan’ny firenena ho toy ny tamin’ny fito taona (talohan’ny nandresen’i Ahmadinejad tamin’ny fifidianana filoham-pirenena)…saingy tsy nahomby izany satria hitan’ny olona fa tsy mitombina ny fiampangana an'i Ahamdinejad… Taorian'ny nanambaran'ireo mpanohana an'i Ahamadinejad ny fahaleovantenan'izy ireo manoloana ireo mpomba ny fitondrana teo aloha, very ny fifantohan'ny media tamin'izy ireo.
Nilaza  i Seyast Nevesht nilaza [fa]:
Manoratra  i Ummat Hezbollah [fa]:
Manoratra  i Zamirkhodagah [fa]:
Manoratra  [fa] i Mohammad Fatemipour, mpitondra fivavahana iray, ao anatin'ny vohikalany manokana:
Mpandinika sady mpanadihady mahatalanjona i Ahmad Shariat. Mazava ny tiana ambara tamin’ny fisamborana azy: ampitomboina ny famoretana ho an’ny mpanohana an’i Ahamdinejad sy ireo izay mino ny fandresen’i Masahi  [Lehiben'ny Mpiasan'i Ahmadinejad miteraka resabe] amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka. Nefa miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, hanova ity trangan-javatra ity ny tanora mpitondra fanovàna amin'ity taona ity. Midika io onitranà 100 tapitrisa tomans io fa ny fikarohana ny marina dia tahaka ny famonoana olona tsy misy paikady.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/10/36410/
 Mpanao gazety Tsy voafetran-tsisintany (Reporters Without Borders): http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-16-04-2012,41718.html